Aye Chan Mon (http://www.ayechanmon-news1.com/) | ဂန္တ၀င်
Home Myanmar Websites Myanmar Crime News Aye Chan Mon (http://www.ayechanmon-news1.com/)
Myanmar Crime News
Aye Chan Mon (http://www.ayechanmon-news1.com/)
Aye Chan Mon ဆိုဒ်ဝင်ရောက်ရန် ၁၅-၂၀ စက္ကန့်အထိ ကြာသည်။ Aye Chan Mon ဆိုဒ်နောက်ခံကိုအပြာရောင် အသားပေးထားသည်။ Aye Chan Mon တွင် နောက်ဆုံးထွက်သတင်းများခေါင်းစဉ်ကိုအနီရောင်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ Aye Chan Mon တွင်သတင်းအချက်အလက်များကို အနောက်ရောင်ဖျော့ဖြင့်ရေးသားပြီး ခေါင်းစဉ်ကိုအနက်ရောင်ရင့် စာလုံးပိုကြီးသည်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ Aye Chan Mon တွင် သတင်းတစ်ခုအောက်တွင် ဆက်နွယ်သည့်သတင်းများကိုဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ သတင်းဆောင်းပါးညာဘက်ဘေးတွင် ထင်ရှားသောမြန်မာသတင်းများ လူဖတ်များသောသတင်းများကိုကဏ္ဍခေါင်းစဉ်နောက်ခံအားခရမ်းရောင်ရင့်ဖြင့်ဖော်ပြပေးထားသည်။ Aye Chan Mon ၏ အောက်ခြေပိုင်းတွင် သတင်းကဏ္ဍများကိုလည်းအရောင် ရင့်ရင့်နောက်ခံထားပြီးဖော်ပြပေးထားသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြားမြန်မာအွန်လိုင်းဆိုဒ်များမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ကျပ် ၁၅၀၀တန် စီဒီအမ်အေဆင်းမ်ကတ်များထပ်မံရောင်းချပေးမည့် သတင်းများ၊ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုသတင်းများစသဖြင့် သတင်းစုံလင်စွာတင်ဆက်ပေးနေသောဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မူရင်းရေးသားသည့်သတင်းဌာနများကိုလည်းဖော်ပြပေးသည်။ Aye Chan Mon သည် ( ThitThooLwin)သစ်ထူးလွင် သတင်းဌာနကဲ့သို့ သတင်းထူးများကိုဦးစွာဖော်ပြပေးနိုင်သော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Aye Chan Mon isaMyanmar Online News Website which is simply designed and easy to use. Aye Chan Mon provides several reliable news contents ranging from MPT selling out CDMA SIM cards by 1,500 Kyats to
the alledged murder of the two foreigners at Thai Island. Like the popular Myanmar news website Thit Thoo Lwin, Aye Chan Mon manages to give all up-to-the-minute latest news on its Aye Chan Mon website.
Previous articleMyanmar Post (http://myanmarpost.blogspot.in/2014/02/phone-good-health-health-updates.html)
Next articleMOI (http://www.moi.gov.mm)
Cokeတစ်ဘူးသောက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲ
၂ဝ၁၈ ၏ အပတ်စဉ်ဂန္ထဝင်ဗေဒင် (မေလ ၂၁-ရက်နေ့မှ ၂၇ ရက်နေ့အထိ)